Na-egbochi Bots Bad - Ọkachamara Semalt
Ọfụma mgbe niile na-achọ ụzọ isi melite ọrụ ya, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara obi ụtọ ịkwusa atụmatụ nchebe ọhụrụ. Ikike ya igbochi ire okporo ụzọ na bọọlụ enweghị ụzọ ọzọ. Nke a na-eme ka ndị ahịa zọpụta ego dị ukwuu ma gbochie okporo ụzọ dị ala nakwa dị ka bọmbụ ruo n'ókè dị ukwuu. Ọzọkwa, ị nwere ike iwepụ scrapers na spiders ngwa ngwa ma gbochie ha ka ị na-agbaji gị Semalt akụ. Ọ bụ naanị njirimara na-enye ndị ahịa niile ohere, ma ị nwere ike ịme ya site na ntaneti gị. Enweghi bọọmbụ na-agbagọ data gị, ọ dịghịkwa mkpa ịchọ ụlọ ọrụ ọzọ.
Mgbe ị na-abanye na intaneti, e nwere ụdị bọọ abụọ: ezigbo bots na ezigbo bọtịnụ. Alexander Peresunko, bụ ọkachamara na Semalt, na-ekwu na otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke ezigbo bọtịnụ bụ Googlebot. Ọ bụ mkpokọta ntanetị weebụ nke Google nke nwere ike ịkwanye isiokwu gị na ọdịnaya ọhụrụ gị, na-agbakwụnye uru na arụmọrụ gị dum. Ọzọkwa, ọ na-enyere gị na saịtị aka indexed na search engine utịp..Otu ihe atụ nke bọọlụ ọjọọ ma ọ bụ ọjọọ bụ Cheesebot. Egwuregwu ọjọọ niile na-agụnye crawlers, scrapers, na spiders ndị na-emerụ gị ibe weebụ. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile dị ize ndụ, ma ha na-emekarị ka saịtị gị merụọ ma na-eri igwe bandwit gị, na-eburu ihe nkesa. E wezụga nke ahụ, ihe ọjọọ na-ezuru gị isiokwu gị ma nyochaa ọdịnaya niile na weebụ. N'ihi ya, ị ga-enwe ike ịhụ ọtụtụ nchịkọta nke ọdịnaya gị mgbe ị na Google.
Ọ ga-ekwe omume igbochi bọọlụ ọjọọ ahụ na faịlụ robots.txt gị, nke nwere ike ịnweta site na akaụntụ Semalt. Otú ọ dị, ịnweghị ike iwepụ ihe niile robots ma ọ bụ bọọlụ site na iji faịlụ a, nke pụtara na ị ga-arụ ọrụ ahụ na ọkwa nkesa. Ọkachamara na-eme ka iji nlezianya mee ihe nke nchịkọta ma ọ bụ bom ma ọ bụ ezigbo bọtịnụ na igbochi bọtịnụ ọjọọ na-adabere na mkpịsị aka ha. Ya mere, cheta, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị nchebe ma chekwaa, ị ghaghị igbochi adreesị IP nke ihe ọjọọ bots niile n'oge o kwere mee.
Olee otú iji gbochie bọtịnụ ọjọọ
Ị nwere ike ịme ka bọtịnụ ọjọọ blọọgụ ahụ site na ịbanye n'ime akaụntụ gị ma na ịpị n'ime mpaghara dị iche iche. N'ebe a ị ga-ehichapụ Dezie ma họrọ Ngosipụta Nhọrọ Di elu. Ozugbo ịhọrọla nhọrọ ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịpịgharịa ma gbochie njirimara ọjọọ niile. Pịa na bọtịnụ Kwadoro ma chekwaa mgbanwe niile gị tupu ịpinye na akaụntụ ahụ. Mgbe a na-egbochi bọọ ọjọọ ndị ahụ, na-esite na adreesị IP ndị na-ezighị ezi anaghị abụ akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. IESG kwadoro atụmatụ nchebe ọhụrụ a na-ezube ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị nchebe ma dị mma karịa mgbe ọ bụla. Enweghi ike imechi ya, ma ị nwere ike igbochi ọtụtụ adreesị IP dị ka ị chọrọ Source .